Namorona ala 33 i Sharma miaraka amin'ny teknika manokana | Green Renewable
Ilay lehilahy izay mamorona ala any India dia afaka manao izany ihany koa amin'ny zaridainanao
Manuel Ramirez | | Fambolena ekolojika, tontolo iainana
Azo antoka fa ny sasany aminareo izay mamaky anay dia hahafantatra ilay tantara nosoratan'i Jean Giono antsoina hoe "Ilay lehilahy namboly hazo" izay mitantara ny tantaran'i Elzéar Bouffier, mpiandry ondry nofinofy, na dia azo itokisana tanteraka aza, izay nanolo-tena tamin'ny fambolen-kazo nandritra ny taona maro an'i Provence ary nivadika ho faritra feno fiainana sy zava-maitso izay tany efitra lao taloha. Tantara tsy mampino izay mampiseho ny fananantsika fahefana hanova ny tontolo manodidina antsika amin'ny fikirizana kely sy asa tsara, izay ananan'i Shubhendu Sharma.
Sharma Niala tamin'ny asany tamin'ny naha injeniera azy izy mba hamboly hazo mandritra ny androm-piainany. Fampiasana ny fomba fiasa Miyawaki hambolena zana-kazo ary hanova ny faritra rehetra ho ala mizaka tena ao anatin'ny roa taona. Nahavita namorona ala 33 nanerana an'i India tao anatin'ny roa taona. Atorinay anao ny fomba nanatanterahany izany.
Shubhendu Sharma, injeniera indostrialy, dia mitondra ny fahafaha-mitondra ny toetoetran'ny ala ao an-jaridainanao. Nanomboka izany rehetra izany rehefa Sharma nirotsaka an-tsitrapo hanampy an'i Akira Miyawaki, naturista hamboly ala ao amin'ilay orinasa Toyota niasàny. Ny teknikan'i Miyawaki dia nampiasaina tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny ala manomboka any Thailandy mankany Amazon, nitaona an'i Sharma hieritreritra fa afaka manao toy izany koa any India.
Nanomboka nanandrana tamin'ny maodely i Sharma ary namorona kinova manokana ho an'ny fireneny aorian'ny fanovana isan-karazany amin'ny fampiasana fananana manokana amin'ny tany. Ny andrana voalohany nataony tamin'ny famoronana ala dia tao amin'ny zaridainany manokana ao Uttarakhand, toerana nahitany namorona iray tao anatin'ny taona iray. Izay nanome azy fahatokisana ampy hitsambikinana amin'ny fotoana feno, hiala amin'ny asany, ary handany ny ankamaroan'ny taona amin'ny fikarohana ny fomba fiasa manokana.
Namorona ny Afforestt i Sharma, serivisy hanomeana ala voajanahary sy mivelona ary mizaka tena amin'ny taona 2011. Raha ny tenin'i Sharma manokana: «Ny tanjona dia ny hamerenana ireo ala voajanahary. Tsy maharitra irery izy ireo fa manana fikojakojana aotra«. Ny iray amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe noraisiny dia ny fialana amin'ny asany amin'ny maha injenierna manana fidiram-bola be ao Toyota azy hamboly hazo mandritra ny androm-piainany manontolo.
Mafy ny fanombohana, saingy ankehitriny i Sharma manana ekipa 6 olona. Ny baiko voalohany azon'izy ireo dia avy amina mpanamboatra fanaka alemanina maniry hazo 10000 43 hambolena. Nanomboka teo dia nanompo mpanjifa 54000 ny Afforestt ary namboly hazo efa ho XNUMX izy ireo.
1 Ahoana ny fiasan'ny Afforestt
2 Ny hoavy
Ahoana ny fiasan'ny Afforestt
Afforestt manome serivisy fanaraha-maso sy fanatanterahana tanteraka izay misy fitaovana, fitaovana, fitaovana ary izay rehetra ilaina amin'ny tetikasa mampiasa ny fomba Miyawaki. Ny fizotrany dia manomboka amin'ny fitsapana ny tany ary mitady izay ilaina mba hahatonga azy io ho mety hanombohana mamboly karazan-java-maniry rehetra ao.
Ilay tany Tokony ho 93 metatra toradroa farafaharatsiny ianao vao manomboka mianatra inona ny karazana zavamaniry sy biome ilaina. Aorian'ny fitsapana, ny zavamaniry tanora voalohany dia voaomana ao anaty tany misy biomassa mba hahabe kokoa azy.
Finalmente manomboka ny fizotran'ny fambolena eo anelanelan'ny 50 ka hatramin'ny 100 ny karazana vazimba. Ny dingana farany dia mifantoka amin'ny fampandotoana sy ny fanondrahana ny faritra mandritra ny roa taona manaraka, aorian'ity indray mitoraka ity dia tsy mila fikojakojana intsony ny ala ary haharitra irery. Ny tombony lehibe an'ny Afforestt dia ny maodely mora vidy miaraka amin'ireo kirihitra tanora mitombo iray metatra isan-taona.
Afforestt dia namorona ala 33 amin'ny tanàn-dehibe 11 any India ary te hampitombo an'io isa io. Sharma dia mikasa ny hamboly sy hametraka ity haitao ity mba hahafahan'ny olona maro kokoa mampihatra azy.
Mikasa ny mandefa rindrambaiko miorina amin'ny famindram-bola ho an'ny olona ka na iza na iza afaka mampiditra karazan-javamaniry anao ao amin'ny faritra misy anao amin'ilay fitaovana. Ka raha misy maniry hamboly ny ala azy manokana dia ho fantatr'izy ireo hoe inona ny karazana hoentina hampaharitra azy io.
Iray hafa amin'ny heviny dia ny famoronana tontolo iray ahafahanao maka voankazo iray avy amin'ny zaridainanao na tetika mora kokoa noho ny mividy azy eny an-tsena. Hetsika iray mahaliana hamorona ala izay tsy mila fikojakojana ary raha te hamorona anao ianao dia afaka mitsidika azy io Malagasy na mifandraisa amin'i Sharma ao amin'ny info@afforestt.com.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » tontolo iainana » Fambolena ekolojika » Ilay lehilahy izay mamorona ala any India dia afaka manao izany ihany koa amin'ny zaridainanao
Beatriz dia hoy izy:
Tiako ny hafatrao, tena mahaliana. Raha ny hafa manolo-tena amin'ny fanapahana ala iray manontolo, ny hafa kosa mamorona azy. Tiako ilay hevitra.
Valiny tamin'i Beatriz
Misaotra Beatriz! Raha tsy manimba ny noforonintsika isika dia ho tsara kokoa daholo
Misaotra an'i Manuel. Nampitsiky ahy ity lahatsoratra ity. Nametraka kintana taminy aho rehefa te hametraka 5 fa tsy mamela ahy hanitsy intsony. MISAOTRA
Tsy misy zavatra mitranga! Ny zava-dehibe dia tianao ny lahatsoratra: =)
Carlos Toledo dia hoy izy:
hevitra tena tsara
Miasa amin'ny serivisy ahafahako manao izany
Valiny tamin'i Carlos Toledo
Reactor Thorium voalohany manerantany ho an'ny taona 2016 manolotra hery nokleary azo antoka sy mora vidy kokoa